Real Madrid Oo Lacag Iyo Hazard Ku Dooneysa Weeraryahanka Kooxda PSG Kylian Mbappe
HomeSuuqa kala iibsigaReal Madrid oo lacag iyo Hazard ku dooneysa weeraryahanka kooxda PSG Kylian Mbappe
December 2, 2020 Suuqa kala iibsiga, Wararka Ciyaaraha 0
Real Madrid ayaa lagu soo waramayaa inay diyaar u tahay inay lumiso Eden Hazard isla markaana ay u isticmaasho weeraryahanka reer Belgium saxiixa Kylian Mbappe oo ka tirsan Paris Saint-Germain .
Hazard ayaa ahaa flop weyn tan iyo markii uu yimid caasimada Spain isaga oo kaga yimid kooxda Chelsea sanadkii hore lacag dhan 150 milyan oo euro ah.
29-sano jirkaan ayaa waxaa ku dhibtooday dhaawacyo iyo taam ahaansho, isagoo ciyaaray 25 kulan oo uu ku soo bilaabay tartamada oo dhan tan iyo bilowgii 2019-20.
Sida laga soo xigtay barnaamijka Isbaanishka ee El Chiringuito , Madrid waxay dooneysaa inay Hazard ka saarto buugaagtooda sanadka soo socda waxayna qorshayneysaa lasoo wareegid weeraryahanka reer France.
Los Blancos ayaa si xoogan loogu xantaa inay dooneyso weeraryahanka PSG Mbappe bartilmaameedkooda koowaad noqon doono, waxa kusoo qaadan doontaa lacag iyo Hazard markii oo furmo suuqa kala iibsiga bisha Janaayo.
Hazard ayaan la fileynin inuu mar kale ka soo muuqdo Madrid ka hor sanadka cusub ka dib markii uu dhaawac ka soo gaaray muruqa lugta hore ee kulankii ay guuldarada ka soo gaartay Alaves ee isbuucii hore .